University of Jazeera - Waxbarashada Sare ee Imaaraadka. EducationBro
gaabinta : UoJ
Ha iloobin in aad discuss University of Jazeera
The University of Jazeera jaamacadda ugu prefered ee Imaaraadka ee Dubai, sida aynu xoogga on waxbarashada, koritaanka xirfadeed iyo qof ahaaneed ee arday kasta. Waxaan u hibeeyeen ilaa ay heer sare walbaba, waxbarashada, and research, iyo horumarinta madaxda nidaamo badan oo kala ah mid caalami ah.
Tan iyo markii la aasaasay, UoJ ayaa laftiisa ka go'an inuu siiyo waxbarasho heer caalami ah oo isku diyaarinaya ardayda in tacliin, shakhsi ahaan iyo xirfad waayo mustaqbalkooda guulaha beerahooda doortay. UoJ awood ku hawlan yihiin la cilmiga iyo cilmi baarista in ay riixaan xuduudaha aqoonta aadanaha. Waayo, arday aad ugu faraxsan in ay baaraan arrimaha ugu weyn ka mid ah 21stqarnigii, UoJ bixisaa ah waayo-aragnimo ardayga laga qabanin, iyo barnaamijka kaalmada maaliyadda deeqsi.
hab waxbarasho Our waa hab-oriented; our xoogga saaran yahay kabidda aragtida iyo dhaqanka, sida manhajka waa mustaqbalkiisa-kexeeyey oo xirfad ku salaysan. Muhiimadu waa ardayga, iyo guulaha ah in Qalinjabiyeyaasha our ayaa gaari waa caddayn of fiiro in
Isgaarsiinta & Media Faculty
Technology Information & Design Faculty
Suuq- & PR Department
College of Law & dhaqaalaha
College of Education Guud
Ma rabtaa discuss University of Jazeera ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
Ras al-Khaimah Medical iyo Sciences University Caafimaadka Ras al-Khaimah
Jaamacadda American ee Dubai Dubai